एक अकल्पनीय सम्पदा, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
के तपाईंले कहिल्यै कसैलाई तपाईंको ढोका ढकढक्याएको चाहनुभएको छ कि एक धनी मामा तपाईंले सुन्नु भएन तर मर्नुभयो र तपाईंलाई ठूलो भाग्य छोड्नुभयो? कतैबाट पैसा आउँछ भन्ने धारणा अत्यन्तै रमाईलो छ, धेरै व्यक्तिको सपना र धेरै पुस्तक र फिल्मको आधार। तपाइँ तपाइँको नयाँ फेला परेको धनको साथ के गर्नुहुन्छ? यसले तपाईंको जीवनमा कस्तो असर पार्दछ? के उसले तपाईंको सबै समस्याहरू समाधान गर्दछ र तपाईंलाई समृद्धिको बाटोमा हिंड्न दिनेछ?
यो इच्छा तपाईंको लागि आवश्यक छैन। यो भइसक्यो। तपाईं एक धनी नातेदार छ जो मरेका छ। उनले एउटा इच्छाशक्ति छोडिदिए जुन उनले तपाईंलाई मुख्य लाभार्थीको रूपमा प्रयोग गरे। यसलाई कुनै पनि अदालतमा चुनौती दिन वा उल्टाउन मिल्दैन। यी मध्ये कुनै पनि कर वा वकिलमा खर्च गरिएको छैन। यो सबै तपाईंको हो।
ख्रीष्टमा हाम्रो चिनारीको अन्तिम तत्त्व एउटा उत्तराधिकारी हुनु पर्छ। हामी अब हाम्रो पहिचान क्रसको माथिल्लो छेउमा पुगेका छौं - हामी अब महान् समापनमा छौं: "हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हौं र ख्रीष्टका संयुक्त उत्तराधिकारीहरू हौं, जसले आफ्नो सम्पत्ति हामीसँग बाँडछन्"। (गला। 4,6-7 र रोम 8,17.१XNUMX)
नयाँ करार येशूको मृत्युको साथ प्रभावकारी भयो। हामी उसका हकवालाहरू हौं र परमेश्वरले अब्राहमलाई गर्नुभएको सबै प्रतिज्ञाहरू तपाईंकै हुन् (Gal.3,29)। येशूको इच्छामा भएका प्रतिज्ञाहरूलाई काकाको इच्छामा भएका पार्थिव प्रतिज्ञाहरूसँग तुलना गर्न सकिदैन: पैसा, घर वा कार, चित्र वा पुरातन चीजहरू। हामीसँग सबै भन्दा राम्रो र उज्जवल भविष्य छ जुन कसैले कल्पना गर्न सक्छ। तर वास्तवमा परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनु, अनन्तसम्म अन्वेषण गर्नु, निर्भयतापूर्वक कुनै ठाउँमा जानुभएको ठाउँमा जानुको मतलब के हो भन्ने कुरा हाम्रो लागि अकल्पनीय छ!
जब हामी इच्छापत्र खोल्छौं, हामीले प्रभावकारी रूपमा के छोडियो भनेर सोध्नु पर्दैन। हामी आफ्नो उत्तराधिकार पक्का हुन सक्छौं। हामी जान्दछौं कि हामी अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछौं (तीतस 3,7), थप उहाँलाई प्रेम गर्ने सबैलाई परमेश्वरको राज्यको प्रतिज्ञा " (ज्याक। २,)) हामीलाई पवित्र आत्माको ग्यारेन्टीको रूपमा दिइएको छ कि हामीले एक दिन इच्छाशक्तिमा हामीलाई भनेको सबै कुरा प्राप्त गर्नेछौं (एफि। १:१:1,14); यो एक धेरै ठूलो र अद्भुत सम्पदा हुनेछ (एफि। २,१।) पावलले एफिसमा भने। १:१:1,13: उहाँमा, तपाईंको उद्धारको सुसमाचार, सत्यको वचन सुनेपछि, तपाईं पनि उहाँमा प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माद्वारा छाप लगाइनुभयो जब तपाईं विश्वासी हुनुभयो। एक अर्थमा, हामी पहिले नै समृद्धिको बाटोमा छौं। बैंक खाताहरू पूर्ण छन्।
के तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो धन प्राप्त गर्न कस्तो हुनुपर्छ? हुनसक्छ हामी यसको लागि भावना प्राप्त गर्न सक्दछौं यदि हामी मिसोर मकडकको डिस्ने फिगरलाई कल्पना गर्छौं। यो कार्टुन चरित्र एक फोहोर धनी मानिस हो जो उसको कोषमा जान मन पराउँछ। उसको मनपर्ने कार्यहरू मध्ये एक सुनको सबै पहाडहरूमा पौडिँदै छ। तर ख्रीष्टको साथ हाम्रो उत्तराधिकार त्यो कुकर्मको अथाह सम्पत्ति भन्दा बढी विलासी हुनेछ।
हामी को हौं? हाम्रो परिचय ख्रीष्टमा छ। हामीलाई परमेश्वरको सन्तान हुन बोलाइएको छ, हामीलाई नयाँ बनाउनु भएको छ र उहाँको अनुग्रहले ढाकिएको छ। हामीले फल फलाउने र ख्रीष्टको जीवनलाई अभिव्यक्त गर्ने आशा गरिन्छ, र अन्ततः हामी सबैले यस जीवनमा हामीले भोगेका धन-सम्पत्ति र आनन्दको अधिकार पाउनेछौं। हामी आफूलाई को हो भनेर आफैलाई सोध्नु हुँदैन। न त हामीले येशू बाहेक अरू केहि वा हाम्रो पहिचान खोज्नु पर्छ।